Ithegi: iitemplate ze-imeyile | Martech Zone
Maka: iitemplate ze-imeyile
Izikhokelo ze-imeyile zasimahla eziphendulayo ezivela kwiLitmus
NgoLwesithathu, Aprili 20, 2016 NgoMvulo, Matshi 8, 2021 Douglas Karr
Sisebenza nomthengi ngoku ii-imeyile zorhwebo ezingaphenduliyo okwangoku. Asithandabuzi ukuba baphulukana nonqakrazo kunye notshintsho olunikiweyo lokutshintsha okukhulu kwababhalisi abafudukela kwiselfowuni. I-60 %% yazo zonke i-imeyile ezithunyelweyo zivulwa kwifowuni. Uqhakamshelwano oluqhubekayo Unokuba sele uluqonda uyilo oluphendulayo- ikhowudi yewebhu elungelelanisa ubeko lwendawo yakho ukuqinisekisa ukuba ilungiselelwe isikrini kunye nokusonjululwa kwayo
I-Stamplia: Thenga okanye wakhe iTemplate yakho ye-imeyile ngokulula
NgoLwesihlanu, Julayi 10, 2015 Douglas Karr
Ukuba ujonge inkuthazo yetemplate yakho elandelayo ye-imeyile, ujonge ukuthenga itemplate ye-imeyile onokuyiguqula, okanye ujonge ukwakha itemplate ye-imeyile ephendulayo ukusuka ekuqaleni-ungakhangeli ngaphezulu kweStamplia. Banikezela ngeeleta zeendaba ezingabizi kakhulu kodwa ezintle, ii-imeyile zentengiselwano, kunye neetemplate ezikulungeleyo ukuya eMagento, Prestashop ecommerce, Campaign Monitor okanye iMailchimp. Itemplate nganye ye-imeyile inephepha lenkcazo, amanqaku, kunye
Ukujonga umkhankaso: Inkonzo ye-imeyile enamandla ye-Arhente okanye ishishini
NgoMvulo, Matshi 16, 2015 NgeCawa, ngoMatshi 15, 2015 Douglas Karr
Umboneleli wesevisi ye-imeyile esingabelananga naye malunga nokuGada uMkhankaso Bahlala behlonitshwa kolu shishino ngenxa yokunika ingxelo ngokugqwesileyo, kodwa baye bavela baba ngumnikezeli ngenkonzo we-imeyile owomeleleyo kwishishini okanye kwiiarhente. Eminye yeempawu ezizodwa zoPhengululo lweNqaku loMkhankaso woNgcaciso loMkhankaso-weNkqubo yokuGada ayongezeleli ii-logo kwiimeyile zayo eziphumayo kwaye ujongano lomsebenzisi lunokubhalwa mhlophe kwiarhente yakho okanye kwishishini. Ukunika ingxelo nge-iPhone-Ukujonga uMkhankaso
dotMailer EasyEditor: Tsala kwaye ulahle ukuhlela i-imeyile
NgoMvulo, Novemba 4, 2013 NgoMvulo, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Zimbalwa izinto ezinokukhathaza ngaphezu kokwenza itemplate ye-imeyile ye-imeyile okanye ukusebenza nomakhi wetemplate weqela lesithathu. Khawufane ucinge xa ​​usiya kukwazi ukuyila, ukuyila, ukuyila ngokutsha, kwaye wenze ngokwezifiso iitemplate zakho ze-imeyile… ngaphandle kokubhalwa kwe-HTML okanye izakhono zoyilo lwewebhu. Yiyo kanye le dotMailer ayenzileyo nge-EasyEditor yabo. Iimpawu zedotMailer's EasyEditor: Ngenisa ngokukhawuleza imifanekiso yakho kwaye wenze ithala lencwadi-Hlala uhlelekile ngayo yonke imifanekiso yemikhankaso kwindawo enye. Uvavanyo lomyalezo wephulo